Dadka Sanaag & Haylaan oo ka banaanbaxay Faragelinta Maamulka Somaliland – SBC
Dadka Sanaag & Haylaan oo ka banaanbaxay Faragelinta Maamulka Somaliland
Dadka ku dhaqan degmooyinka gobolada Sanaag iyo Haylaan ayaa kulamo gaar gaar ah wada yeeshay kuwaas oo looga hadlayay arimaha dhaqdhaqaayada Maamulka Soomaaliland uu ka wado goboladaas.
Kulan ka dhacay magaalada Baran islamarkaana ay isugu yimaadeen odayaasha, waxgaradka, Maamulka gobolka iyo ururada Bulshada ayaa loogaga soo saaray baaqyo lagu diidanyahay dhaq dhaqaaqyada doorashooyinka Maamulka la baxay Soomaaliland uu ku doonayo in uu ku keeno goboladaas.
Waxaa ay sheegeen dadkii halkaasi ka hadlay in aanay dooneynin in ay soo guda galaan waxyaabaha maamulkaasi uu doonayo in deegaanadoodu keeno, ama ay ka dhacaan deegaanadooda, iyagoona dadka deegaanka ugu baaqay in ay ka soo horjeestaan oo ay ku banaan baxaan meelkasta oo ay gobolka Ka joogaan.
Saaka magaalada Baran xarunta gobolka Sanaag waxaa ka bilowday banaan baxyo ay dadku isugu soo baxayaan goobaha fagaareyaasha ah, halkaas oo ay ku muujinayeen diidmadooda ku aadan faragelinta Maamulka Soomaalidiidka ahi ka wado gobolkooda.
Maamulka Soomaaliland ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay ka socday ololeyaasha ay sameynayaan ururada siyaasadeed eek a jira kuwaasi oo ku aadan doorashooyinka degmooyinka Maamulkaasi.
Sikastaba ha ahaatee dhaq dhaqaaqyo ay dareemeen shacabka goboladaas ayaa uu maamulkaasi ka bilaabay goboladaas taasina waxaa maanta si diiran uga hadlay Maamulka Puntland.
Noofember 26, 2012 at 7:52 pm
war benta ha dayo sanag waxa ka jira wa ognhy badhana fashilada manta ka dhcday wa ognahy
Noofember 26, 2012 at 8:02 pm
mglada badhan saka waxa ka dhcy bnanbx fashilmay halkas o dadka mglada degani dhamantod ka biyo diden bananbxani ! waxa keliya o mesha yimi wa ardadi secondryga alfrqun o barasbku mclin u ah hadaba ardy siyasad ma gasha waxa ka si wayna ta dhcdadi yabka lahyd ardadi rer alfrqan o sinay shiday (ya ka danbyey arinkan!! ) macalinta sinay o xisbi u furan yhy ma cid by wax yelen iyaga qudhodu kama ronan werar xogan ayey qaden o khsare geystay
Noofember 27, 2012 at 1:28 pm
adeer reer sanaag iyagaa gurigooda iska leh ninkaay doonaan baay marti gelinyaan markaa wiil yar oo tuulada garoowe ka qaylinaya loo joojin maayo iyagaana xaq u leh inaay ka hadlaan waxa aay rabaan hadaay somaliland soo dhowaaynayaan iyagaay u taal laakiin garoowe iyo boosaaso uma taal mida kale puntland maxaay la qaaylisaa marka sanaadiiq somaliland ah la keeno oo aanay uga hadlin gobolka inta ka horaysa waa yaab!!!!!!